Mmadụ inwe mmekọahụ tupu ọ lụọ di ma ọ bụ nwunye ọ̀ dị njọ? | Ihe Baịbụl kwuru
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Malagasy Maltese Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Xhosa Zulu
“N’ihi na ihe Chineke chọrọ bụ ka . . . unu zere ịkwa iko.”—1 Ndị Tesalonaịka 4:3.
N’ebe ụfọdụ, ọ bụghị ihe ọjọọ ma mmadụ abụọ torola eto nwee mmekọahụ. N’ebe ụfọdụkwa, ọ bụghị ihe ọjọọ ma ndị na-eto eto na-egwu egwuregwu iberiibe.
Ihe Baịbụl kpọrọ ụdị mmekọahụ ọ bụla mmadụ na-enwe mgbe ọ na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye bụ “ịkwa iko.” Chineke chọrọ ka ndị na-efe ya “zere ịkwa iko.” (1 Ndị Tesalonaịka 4:3) E nwere mmehie ndị Baịbụl kwuru na ndị na-eme ha agaghị eketa Alaeze Chineke. Ụfọdụ n’ime ha bụ mmadụ ịkwa iko mgbe ọ na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụkwanụ di ma ọ bụ nwunye ịkwa iko, mmadụ ikpere arụsị, ịṅụbiga mmanya ókè, ime mgbaasị, igbu ọchụ, na izu ohi.—1 Ndị Kọrịnt 6:9, 10; Mkpughe 21:8.
Baịbụl kwuru na “Chineke ga-ekpe ndị na-akwa iko” ikpe. (Ndị Hibru 13:4) Ọ bụrụ na anyị na-erube isi n’iwu Chineke nyere gbasara mmekọahụ, ọ pụtara na anyị hụrụ Jehova n’anya. (1 Jọn 5:3) Ọ na-agọzikwa ndị na-erube isi n’iwu ya.—Aịzaya 48:18.
Ọ̀ dị njọ ndị na-abụghị di na nwunye igwu egwuregwu iberiibe?
“Ka a ghara ịkpọtụdị ịkwa iko na ụdị adịghị ọcha ọ bụla ma ọ bụ anyaukwu aha n’etiti unu.”—Ndị Efesọs 5:3.
Ọtụtụ ndị na-ekwu na nwoke na nwaanyị na-abụghị di na nwunye inwe mmekọahụ bụ ihe ọjọọ. Ma, o nweghị ihe o mere ma ha na-egwu egwuregwu iberiibe.
Ọ bụghị naanị ịkwa iko ka Baịbụl kwuru na ọ dị njọ. O kwukwara na “adịghị ọcha” na “omume rụrụ arụ” adịghị mma. (2 Ndị Kọrịnt 12:21) Ọ pụtara na e nwere ụdị egwuregwu ndị na-abụghị di na nwunye nwere ike igwu ya adị njọ n’anya Chineke n’agbanyeghị na ha enweghị mmekọahụ.
Ihe Baịbụl na-ekwu bụ na ọ bụ naanị ndị bụ di na nwunye kwesịrị ịna-egwu ụdị egwuregwu ndị ahụ. Baịbụl kwukwara na “iji anyaukwu na-enwe agụụ mmekọahụ” adịghị mma. (1 Ndị Tesalonaịka 4:5) Ihe a Baịbụl kwuru ọ̀ pụtara gịnị? Chegodị banyere ihe a gbasara ma nwoke ma nwaanyị. Nwa agbọghọ nwere ike ikpebi na e nweghị ihe ga-eme ka ya na enyi ya nwoke nwee mmekọahụ. Ma, ya na ya ana-egwu egwuregwu iberiibe. Ihe a ha na-eme gosiri na ha na-enwere ihe na-abụghị nke ha anyaukwu. N’ihi ya, ha ‘ji anyaukwu na-enwe agụụ mmekọahụ.’ Baịbụl kwuru na ndị na-akpa ụdị àgwà a agaghị eketa Alaeze Chineke.—Ndị Efesọs 5:3-5.
Olee otú anyị ga-esi zere mmekọahụ rụrụ arụ?
“Gbaaranụ ịkwa iko ọsọ.”—1 Ndị Kọrịnt 6:18.
Baịbụl kwuru na ọ bụrụ na onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye chọrọ ka ya na Chineke dịrị ná mma, o kwesịghị inwe mmekọahụ.—Ndị Kọlọsi 3:5, 6.
Baịbụl gwara anyị ka anyị ‘gbaara ịkwa iko ọsọ.’ (1 Ndị Kọrịnt 6:18) Ọ pụtara na mmadụ kwesịrị izere ihe ọ bụla nwere ike ime ka ọ kwaa iko. (Ilu 22:3) Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na mmadụ achọghị itinye aka n’omume rụrụ arụ, ya na ndị na-eleghara ihe Chineke kwuru gbasara mmekọahụ anya ekwesịghị ịna-akpa. Baịbụl gwara anyị, sị: “Onye ya na ndị maara ihe na-eje ije ga-ama ihe, ma ihe agaghị agaziri onye ya na ndị nzuzu na-emekọ ihe.”—Ilu 13:20.
Ọ bụrụ na mmadụ na-eche banyere ihe na-adịghị mma, o nwere ike ime ka onye ahụ tinye aka n’omume rụrụ arụ. (Ndị Rom 8:5, 6) N’ihi ya, anyị ekwesịghị ịna-ege egwú rụrụ arụ ma ọ bụ na-ele fim na-egosi ebe a na-eme ihe rụrụ arụ. Anyị ekwesịghịkwa ịna-agụ akwụkwọ ọ bụla na-ekwu banyere ịkwa iko ma ọ bụ omume ndị ọzọ Chineke kpọrọ asị.—Abụ Ọma 101:3.
Chọpụta ihe Baịbụl kwuru banyere mmekọ nwoke na nwaanyị na ihe ndị yiri ya.